အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ COVD-19 ကူးစက်ခံရ - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price က ၎င်းတွင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီမနက်က ပထမဆုံးလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်မှာ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော် COVID-19 စစ်ဆေးလိုက်တော့ ပိုးကူးစက်ခံထားရတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အခုကစပြီး နောက် ၁၀ ရက် အထိ ကျွန်တော် quarantine ဝင်မှာပါ’’ ဟု Price က တွစ်တာတွင်ရေးသားခဲ့သည်။
“ရောဂါကူးစက်ခံရပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာမခံစားရဖို့ အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသပေးလို့ စိတ်ချရပါတယ်’’ ဟု၎င်းက ဖြည့်စွက်ရေးသားခဲ့သည်။
Price သည် ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကန် နှင့်အတူ အစည်းအဝေးများစွာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်အပြင် နယူးယောက်မြို့တွင်ကျင်းပသည့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၌ အခြားနိုင်ငံခြားရေး အရာရှိများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကန်အား စမ်းသပ်ရာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် အတူခရီးသွားခဲ့ကြသည့် အခြားအဖွဲ့ဝင်များတွင်လည်း COVID-19 လက္ခဏာ ပြသမှုမရှိကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Jalina Porter က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှစ၍ Price သည်မည်သူနှင့်မျှ ပြောဆိုထိတွေ့မှုမရှိခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရမှုအန္တရာယ်အတွက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိကြောင်း နှင့် Price အနေဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ရောက်မှသာ ရောဂါ ကူးစက်ခံရခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်းလည်း Jalina Porter ကပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
U.S. State Department spokesperson tests positive for COVID-19
WASHINGTON, Sept. 27 (Xinhua) — U.S. State Department spokesperson Ned Price said on Monday that he had tested positive for COVID-19.
“After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days,” Price tweeted.
State Department deputy spokesperson Jalina Porter told reporters inabriefing that Blinken tested negative Monday morning, and no other members of the traveling party were exhibiting COVID-19 symptoms.
She also suggested that foreign delegations would not be alerted given Price had not been in contact with any of them since Thursday and the risk of exposure likely started on Saturday. Enditem